४ दिने भ्रमण सकेर आज अमेरिका फर्कदै फातिमा, एमसीसी पनि फिर्ता लग्दै ? - hamrosandesh.com – hamrosandesh.com
४ दिने भ्रमण सकेर आज अमेरिका फर्कदै फातिमा, एमसीसी पनि फिर्ता लग्दै ?
एमसीसी परियोजना नेपालबाट फिर्ता लैजाने अमेरिकी तयारी, उपाध्यक्ष फतिमाको भ्रमणमा ‘र्‍यापअप’ गरिने
सुमारले नेपालमा रहँदा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, समाजवादी पार्टीका अध्यक्षद्वय बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालसहितसँग भेट गरेकी थिइन्। उनको चार दिने भ्रमणमा ठोस उपलब्धी देखिएको छैन।
त्यसाे त‍ उनले नेपालमा भएका सबै भेटमा नेताहरुलाई एमसीसी संसदबाट चाँडाे अनुमोदन गर्न आग्रह गरेकी छिन्। तर देशमा जनताकाे चर्काे विराेधका बीच कुनै पनि नेताहरुले ठाेस जवाफ दिएनन्।
सुमारले पनि नेपालले एमसीसी अस्वीकार गरे पनि कुनै अमेरिकालाई कुनै आपत्ति नहुने बताइसकेकी छन्। नेपालले अस्वीकार गरेको अवस्थामा सो बराबरको रकम अर्कै देशलाई अनुदान दिने पनि उनले स्पष्ट पारेकी छन्।
देशभरका जनताहरुकाे चर्काे विराेध र नेताहरुकाे अनिश्चित निर्णयलाई आधार मान्ने हाे भने अब लगभग एमसीसी अमेरिकाले फिर्ता लिने सम्भावना देखिएकाे छ।